Momba anay - So Fine Plastic Technology Co.
● Ny kalitao no fototra
● Ny fiainana no aingam-panahy
● Fanavaozana ho fototra
● Ny fanompoana no tanjona
● Ny lamaody no tanjona
Amin'ny maha-mpanamboatra matihanina ny vera insulate sy ny vokatra fanitarana azy, dia natsangana nandritra ny 12 taona mahery i So Fine Plastic Technology Co., Ltd. Any Shunde, Foshan, Sina no misy anay. Ny elanelam-bokinay dia misy varavarana fitaratra vita amin'ny plastika, varavarana fitaratra vita amin'ny alim-baravarana, varavarana fitaratra vita amin'ny vy tsy misy fangarony, varavarana fitaratra fanamainana mifono ary varavarana fitaratra tariby TLCD, fitaratra mihidy ho an'ny varavarankely sy varavarana sns. Mandritra izany fotoana izany, dia manokana amin'ny famokarana karazana profil extrusion plastika maitso rehetra, mombamomba ny extrusion aluminium, profil mombamomba ny malefaka sy mafy ho an'ny varavarana fitaratra varavarana fitaratra sy fitaovana fananganana haingon-trano hafa.
Ny varavaranay fampirantiana fitaratra dia be mpampiasa amin'ny faritra marin-tsarimihetsika cooler / frizera / vata fampangatsiahana / vending ary ny vera louver dia ampiasaina ho an'ny varavarana sy varavarankely fananganana trano na birao. Manana traikefa matotra amin'ny famokarana sy ny endrika famolavolana mandroso izahay, manana fitaovana famokarana feno sy matotra sy ekipa R&D, manarona serivisy fijanonana iray ao anatin'izany ny sary famolavolana, ny fananganana lasitra WEDM, ny fanatsarana ny fivoriambe ary ny fanarahan-dia aorian'ny fivarotana.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia napetraka araka ny tokony ho izy, fantatra amin'ny endrika matihanina sy ny asa-tànana mahafinaritra. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahasalamana ary ny serivisy ho an'ny fiarahamonina. Izy io dia mifototra amin'ny fitaovana Eco-friendly avo lenta ary namboarina tamin'ny fomba tsotra, kanto ary olombelona. Namboarina tamin'ny tombotsoan'ny indostria, mahafeno tanteraka ny filan'ny mpanjifa, ny marika "So Fine", izay manavao hatrany sy mivoatra, Ny tanjonay dia ny ho tonga marika fanta-daza amin'ny indostrian'ny mpanohana an-trano sy ny haingon-trano.
Kalitao henjana sy rafitra fanaraha-maso kalitao, teknolojia mitarika iraisam-pirenena ary asa-tanana kanto, ny antsipiriany rehetra dia miezaka ho tonga lafatra, manatsara hatrany ary manome vokatra avo lenta miaraka amin'ny vokatra tsara sy vokatra avo lenta. Hatramin'izao dia nanome vokatra sy serivisy avo lenta kokoa ho an'ny firenena sy faritra 40 manerantany izy io, ary neken'ny mpanjifa an-trano sy any ivelany.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia nampiditra tsikelikely fitaovana famokarana mandeha ho azy. Mandritra izany fotoana izany, mba hampiroboroboana bebe kokoa ny orinasa ary tokony hanome ny tena ilain'ny mpanjifa sy ny tsena, dia nitombo koa ny tsipika famokarana vata fitaratra varavarana ho an'ny mpanjifa, mba hanomezana vahaolana ho an'ny mpanjifa bebe kokoa amin'ny vata fampangatsiahana sakafo sy zava-pisotro sy fampisehoana .
"Ny kalitao no fototra", "Ny fiainana no aingam-panahy", "Fanavaozana ho fotony", "Serivisy ho tanjona", "Ny lamaody ho tanjona" dia ny finoana izay harahin'i So Fine hatrany.
Tongasoa eto hifandray sy hitsidika anay raha mila fanazavana fanampiny!